Ipulatifomu Yokunquma Isikhathi Sangempela seBluecore ye-eTail | Martech Zone
Ipulatifomu Yokunquma Isikhathi Sangempela seBluecore ye-eTail
NgeSonto, ngoJulayi 9, i-2017 NgoLwesibili, Agasti 18, 2020 Douglas Karr
Ungumakethi. Yini ozoyenza ngokulandelayo? Lo ngumbuzo abathengisi abazibuza wona njalo. Idatha manje isingena ezinhlanganweni ngejubane lokuqopha nangevolumu, futhi inqubo yokuhlela nokwenza le datha ingakhubaza.
Okokuqala, ubhekene nomsebenzi wokwazi izinto ezahlukahlukene ngamakhasimende akho:
Ngobani amakhasimende ami abaluleke kakhulu?
Ngobani amakhasimende ami athenga kuphela izinto ezinesaphulelo?
Yimaphi amakhasimende engisazowalahla?
… Futhi uhlu luyaqhubeka.
Uma ukwazi ukuhlanganisa idatha yeziteshi eziningi futhi wenze umqondo wokuthi ngubani okhasimende lakho, wenzani ngokulandelayo ngalolo lwazi? Okushoyo, wenza kanjani ngakho? Lolu uhlelo lwakho lwemidiya: Ubhekise kubani, udlulisa leyo milayezo ngamiphi imigudu futhi wenza nini? Lokhu kujula kolwazi, ukuqonda, kanye nekhono akutholakali kubathengisi abaningi.
Ukuphendula le nselelo yezimboni, uBluecore, umhlinzeki wezobuchwepheshe we-SaaS oneminyaka emine, umemezele iPlatforming Platform yayo entsha yabathengisi ukusiza ukuphendula umbuzo othi "yini elandelayo?" I-interface yayo eyodwa inika amandla abathengisi bezokuthengisa ukuphatha idatha nokukhiqiza izethameli kuziteshi zonke, ngaphandle kokubandakanyeka kwe-IT.
Siphila emhlabeni wokuzanelisa osheshayo lapho abathengisi bengenaso isikhathi sokunethezeka. Isivinini kanye nokuqonda kwesikhathi sangempela kuyizikhiye zokushayela ukuthola, ukuguqula nokugcina amamethrikhi endaweni yanamuhla yokuncintisana yokuthengisa. CRM futhi analytics Amathuluzi anikeza abathengisi ikhono lokuqongelela imininingwane ngale njongo impela, kepha ukumane uqongelele idatha ayiqhubi imiphumela.
Abathengisi abathengisayo abadingi idatha eningi noma amathuluzi amasha wokuhlanganisa idatha. Badinga usizo lokuchaza izitayela kumininingwane yabo futhi badinga amathuluzi wokuthatha izinqumo ukusebenzisa leyo datha. Nika amandla amaqembu akho ukuthi asebenze kulokho abakwaziyo ngamakhasimende akho ukuze ukwazi ukudala okuhlangenwe nakho okunenjongo ngempela ezikhathini ezifika ngesikhathi ohambweni lokuthenga.
Abakhangisi abadingi idatha eningi. Badinga usizo lokuyisebenzisa - leyo yingxenye elahlekile esitaki sanamuhla sokumaketha. Sakhele ipulatifomu yethu ukuhlanganisa ngaphandle komthungo ngaphakathi kwezitaki ezikhona zokukhangisa, ngaphandle kosizo lwamaqembu e-IT, nangesixhumi esibonakalayo somsebenzisi esenziwe lula ukuze abathengisi bakwazi ukwakha nokuvumelanisa izethameli kuziteshi ezithile ngemizuzwana. UFayez Mohamood, umsunguli obambisene naye, kanye ne-CEO yeBluecore
Njengezicubu ezixhuma kusitaki sakho sokumaketha, iBluecore's Decisioning Platform izama ukuxhuma imithombo yedatha, njenge-CRM, ikhathalogi yomkhiqizo neplatform ye-eCommerce, nobuchwepheshe besiteshi obuxhumana ngqo namakhasimende akho. Ngokwenza njalo, ipulatifomu icubungula ukusethwa kwedatha enkulu ngemizuzwana, ikwenze kutholakale ngokushesha ukuthi abathengisi bakhe izethameli, ezingabandakanya amakhasimende akho abaluleke kakhulu, abathengi bezaphulelo, amakhasimende asezodukelana. Abakhangisi bangabe sebethumela imikhankaso kuziteshi ezifana ne-imeyili, ezenhlalo, ukusesha kanye ne-onsite.
Thola i-Bluecore Decisioning Platform Demo
Masithathe isibonelo esithile kumthengisi wezicathulo zomhlaba kanye nomthengisi wezingubo:
Njengomunye wabadwebi abaphezulu emhlabeni wonke, abathengisi kanye nabasabalalisi bezicathulo zokuqina nobungqabavu, okokugqoka nezinsimbi, lo mkhiqizo womhlaba kudala waziwa ngokuhola izitayela zedijithali futhi unikeza izethameli zawo okuhlangenwe nakho okubandakanya ngempela - kokubili esitolo naku-inthanethi. Kepha njengoba kunjalo ngabathengisi abaningi abaku-inthanethi, ikakhulukazi labo abavela ezinhlanganweni ezinkulu ezinengqalasizinda eyinkimbinkimbi, ukufinyelela nokwenza ngokushesha kwidatha yamakhasimende kube yinselelo enkampanini.
Ukunqoba le nselele, umthengisi waphendukela ku-Bluecore ku:
Hlaziya futhi unqume amazinga okusondela kwamakhasimende usebenzisa idatha yekhasimende lesikhathi sangempela
Thumela ama-imeyili adalwe ngabantu uqobo, okuqukethwe kwemidiya yezenhlalo, ukubonisa izikhangiso kanye nokuhlangenwe nakho okukuwebhusayithi
Thola ukuqonda kwamakhasimende okwenzekayo bese udala izethameli eziqondene nokuthengisa ngemizuzwana ngokuya ngemininingwane yomlando nama-algorithm wokuqagela
Vumelanisa ngokushesha izethameli kuwo wonke ama-imeyili, ezenhlalo nezasayithi ukwenza imikhankaso yeqiniso yokukhangisa yeziteshi eziningi ngaphandle kokuyalela umnyango we-IT
Ngaphambi kweBluecore, besingenakho ukufinyelela okwanele kudatha yethu yabathengi. Asikwazanga ukuyisebenzisa kalula noma sidwebe isenzo kuyo. Sibonile ukuthi iBluecore ngeke isisize kuphela ukuxazulula le nkinga, kodwa ingaxazululwa ngaphandle kokuthwalisa umnyango wethu we-IT womhlaba jikelele. Lokhu bekuyindawo enkulu yokuthengisa kithi, njengoba isikhombimsebenzisi seBluecore esiguqukayo nesisebenziseka kalula sisivumela ukuthi sigcine imikhankaso yethu yokumaketha lapho kufanele ibe khona - ngaphakathi komnyango wezokumaketha, hhayi ezandleni zomnyango wethu we-IT. Ukukwazi ukubuyisa ukulawula kwemikhankaso yethu yokumaketha kwakukukhulu. Asibonanga ipulatifomu lokhu okusebenziseka kalula noma okusheshayo ukukusebenzisa kunoma yiliphi elinye ithuluzi kuze kube manje. Umphathi Omkhulu Wokuthengisa weCRM
Umthengisi manje usebenzisa i- Ipulatifomu Yezinqumo zeBluecore ukuhlaziya ngokushesha nokuhlanganisa idatha, ukukhiqiza izethameli ngemizuzwana nokuqalisa imikhankaso yeziteshi ezinqamula ukwethulwa komkhiqizo omusha. Ngokuqondile, umkhiqizo uzuze ezimweni ezintathu zokusetshenziswa okuyisisekelo:
Ukukhulisa Ukulawulwa Kokumaketha Nokutholakala Kwemininingwane
Ngaphambi kokuqalisa ukusebenza kweBluecore, ukwakhiwa komkhankaso we-imeyili kwakudinga usizo lomnyango wenkampani we-IT futhi kungathatha noma yikuphi ukusuka ezinsukwini ezingama-40 kuye kwezingama-60 ukwethula. Nge-Bluecore, noma kunjalo, iqembu lokumaketha lingavivinya futhi lisebenzise ukushiywa okuhlosiwe kanye ne-lifecycle kubangele imikhankaso ye-imeyili ezinsukwini.
Ngaphezu kokusiza ukugwema ukuhlanganiswa kwe-IT okudla isikhathi nokunzima, iBluecore iphinde yenze kwaba lula ngomthengisi ukuthi ahlanganise le mikhankaso nabanye abalingani bezobuchwepheshe. Isibonelo, iqembu lokumaketha lingathatha umkhankaso obhekiswe kubathengi bamanani aphezulu emadolobheni amakhulu (okuyiBoston, eNew York City, eLos Angeles) futhi bahlanganise imininingwane ne-Handstand Fitness App ukunikeza abathengi kulawo ma-geographies isikhathi sokuqeqeshwa komuntu siqu samahhala .
Imiphumela ebalulekile yale mizamo ifakiwe:
Amandla okukhomba amakhasimende amaningi kusayithi futhi aqale imikhankaso eminingi yokumaketha kabusha neBluecore ngokuqhathaniswa nepulatifomu yangaphambilini yomthengisi, iSaleCycle
Amanani aphezulu avulekile futhi achofoze ngeBluecore kuneSaleCycle, ekugcineni aholele ekubuyiselweni kotshalomali luka-10: 1
Ukwenza ngcono i-Omnichannel Brand Promotion
Lapho umthengisi ebona isidingo sokuhlela ukuxhumana okungaguquguquki kuziteshi zonke, waphendukela ku-Bluecore ukuthola usizo. Umkhiqizo uqale imizamo yawo yokukhuthaza omnichannel ngokwethulwa kwesicathulo esisha kulayini odumile wezicathulo zezemidlalo. Ukuqala, inkampani isebenzise iBluecore's Decisioning Platform ukwakha izethameli zesikhathi sangempela samakhasimende anobudlelwano obuphakeme bokuthenga imikhiqizo kulayini wezicathulo. Bese iletha okuhlangenwe nakho komuntu siqu, okungekho kusayithi kwalezi zilaleli ngokusebenzisa iBluecore ukuze isebenze ngokukhululekile ngamapulatifomu wokwenza ngezifiso indawo futhi ilungise ukwakheka kwekhasi eliyisiqalo endizeni ukukhombisa isicathulo esisha neminye imikhiqizo evela kulayini ofanayo. Le nkampani iphinde yathatha le mizamo enqamula isiteshi ngokunikezela ngempahla efanayo yokudala ngaphakathi kwezikhangiso ze-Facebook nangemikhankaso yokukhangisa nge-imeyili kulabo abathengi abanobudlelwano obuphezulu bokuthenga njengoba kukhonjwe yiBluecore.
Ukunweba impilo yemisebenzi yokwethulwa komkhankaso nokugcina okuqukethwe kuhlanzekile kubathengi bamanani aphezulu, iqembu liphinde laletha inkuthazo ekhethekile yokuphindaphinda izivakashi kanye nabathengi abathola imiyalezo yokuthinta okwesibili enikezela ukungena mahhala komunye wemicimbi yenkampani yomhlaba wonke emikhulu.
Ukuphakamisa okungama-76% kokuchofoza kokuqukethwe okwenziwe kwaba ngokwakho
Ukuguqulwa okwandisiwe ngaphezulu kwe-30% ekushiyeni inqola emikhankasweni ebandakanya isikhuthazo esingeziwe sokufakwa komcimbi wamahhala
Ukuhlonza izethameli ezintsha ezizokhonjwa kuzo zonke iziteshi
IBluecore iphinde yasiza umthengisi ngesinyathelo sokukhulisa ababukeli bakhe eziteshini ezintsha ngokuqhuba umkhankaso wezenhlalo oboshelwe ekwethulweni komkhiqizo omusha we-hype. Isebenzisa i-Bluecore's real-time Decisioning Platform, inkampani yakha izethameli zabathengi ababuke umkhiqizo omusha ezinsukwini ezingama-60 ezedlule kepha abawuthenganga futhi babakhomba ngezikhangiso ze-Facebook.
Sekukonke, iBluecore's Decisioning Platform isizile iqembu lokumaketha lale nkampani ukuthi lilawule idatha yamakhasimende, lenze leyo datha isebenze futhi iyisebenzise ngendlela ehlakaniphile, eyenziwe yaba ngeyakho ukwenza ngcono ukusebenza kuziteshi zonke. Kusukela asebenze neBluecore, umthengisi ufunde ukuthi ukufeza le miphumela akukhona ukuthola izintaba zedatha yamakhasimende endaweni eyodwa. Esikhundleni salokho, kumayelana nokuletha inqubo yokuthatha izinqumo yokuthi yenzeni ngayo yonke leyo mininingwane kungxenyekazi eyodwa.
Ngama-Audience Insights, abathengisi be-eCommerce bathola ukufinyelela kudeshibhodi esheshayo futhi ejulile kakhulu embonini yemininingwane yokuziphatha neyomkhiqizo nganoma iyiphi ingxenye yezethameli abakhetha ukuyakha. Lapho umakethi esedale izithameli ngaphakathi kweBluecore, manje sebengafinyelela kuma-Audience Insights ukuze babone ngeso lengqondo ukuthi ingxenye ethile ibikezelwa ukuthi izobandakanya futhi iguqule kanjani, bese ithuthukisa imikhankaso namasu okukhulisa imiphumela.
Ngemininingwane yezithameli, abaholi bezokumaketha bangafunda ukuthi izingxenye zabo zamakhasimende ezibaluleke kakhulu zisebenza kanjani maqondana namanye amaqembu wamakhasimende, nokuthi imikhankaso yabo ihamba kanjani ngalezo zilaleli. Abathengisi bangahlaziya leli sonto ledatha ngesonto bese behlela amasu wokumaketha ngokumelene nezingxenye ezithile zamakhasimende abo.
Ideshibhodi ye-Audience Insights iphendula imibuzo efana nale:
Yini ukubaluleka kwalezi zilaleli? Ukubheka iphesenti lemali engenayo isiyonke, inani le-oda elijwayelekile (i-AOV), inani elijwayelekile lemikhiqizo nge-oda ngayinye, inani lesilinganiso sokuphila kanye nenani lesilinganiso lesikhathi sokuphila
Iyini impilo yalaba balaleli? Ukwahlukana kwamakhasimende alahlekile, asebenzayo futhi asengozini
Ngingaxhumana kuphi nalezi zilaleli? Imininingwane yokuthi mangaki amakhasimende ezilalelini ezithile angafinyelelwa esiteshini esithile, njenge-imeyili, ezomphakathi, isibonisi noma isayithi
Ngabe lezi zilaleli zihlanganyela kanjani nemikhiqizo? Kukhonjiswa “Rockstars,” “Cash Cows” kanye ne- “Hidden Gems” products
Ngabe lezi zilaleli zihlangana kanjani nesiza sami? Qondisisa kalula izitayela zomcimbi, ifaneli yokuguqulwa kwesayithi nokuqhathaniswa kwemicimbi yesayithi
Ngabe lezi zilaleli zihlangana kanjani nama-imeyili ami? Ukubuka okuningiliziwe kwama-imeyili athunyelwe, avuliwe, futhi achofoziwe, kanye nokuzikhipha ohlwini ngokuya ngamasegimenti ezethameli ngazinye
Ubani amakhasimende athakazelisa kakhulu? Ukubukeka okungaziwa kwabathengi ngabodwana abahlukaniswe "ngabasebenzisi abaphezulu," "iziphequluli eziphezulu" kanye "namandla aphezulu"
Funda kabanzi mayelana nokuqonda kwezilaleli
Tags: ukuqonda kwezithameliokuluhlazaukuthatha isinqumoisikhathi sangempela